Ngokuqinisekile, abaningi babone ukukhangisa kwe-cereal eyomile edumile kanye nezinye izinhlobo zokudla kwasekuseni ezidumile. Namuhla zithandwa kakhulu: ukukhangisa kusenza sikwazi ukubaluleka nokuthi ukusetshenziswa kusindisa isikhathi esiningi. Noma kunjalo, konke akuyona into engavamile. Uma ama-flakes esenziwe kuphela kusuka kwesinye isithako, namhlanje ahlanganiswa nama-flavour ahlukahlukene kanye nama-preservatives, engabangezeli ekusebenzeni kwawo.
Ukukhangisa kusitshela futhi kusitshengisa inani elikhulu lemikhakha yamahlumela. Iningi lazo lenziwe kusukela emzimbeni. Kodwa-ke, bonke abantu kufanele bakhumbule ukuthi ama-corn flakes ngaphezu kommbila nawo aqukethe isamba esikhulu soshukela (esifana nekhekhe), okuyinto engathandeki kakhulu empilweni. Ngaphezu kwalokho, abazali abaningi banikezela izingane zabo ukudla okulula kwasekuseni ne-yogurt noma ubisi. Ngokuphambene nenkolelo evamile mayelana nezinzuzo ze-flakes eyomile, ukusetshenziswa kwabo okuqhubekayo kungaholela ngokushesha ekukhulupheni.
Yikuphi okusanhlamvu kwasekuseni okuthandwayo?
Ukufaneleka kwezinsuku ezingu-14
Abantu abaningi bathonywa ukukhangisa futhi bayakukholelwa ku-naively kuyo. Enye yezinhlobo ezidumile kakhulu zokusanhlamvu okumile, okungukuthi, izikhathi zokuphumula zisesimweni esishayo esibizwa ngokuthi i-Fitness izinsuku ezingu-14. Ngokuqinisekile wonke umuntu wabona lesi sikhangiso. Umkhiqizi walolu hlobo lokudla kwasekuseni uthembisa abesifazane abasebenzisa lokhu okusanhlamvu ekudleni kwasekuseni futhi esikhundleni senkambo esemqoka yokudla kwasemini, ukulahleka kwesisindo esheshayo nokusebenza kahle. Kodwa-ke, ukubuyekezwa kwabesifazane abavivinya lezi zinhlayiya akude neze okungaqondakali: akuwona wonke owesifazane ophawula noma yimuphi umphumela. Ngokungajwayelekile, kuphela ukuthi umphumela uzoba kuphela uma bewadla, abesifazane babona enye ukudla. Lokhu kungenzeka ukuthi kuchazwe ukuthi lapho ukucubungula ama-flakes balahlekelwa yizo zonke izinto zabo eziwusizo. Ummbila ekuqaleni uwusizo kakhulu empilweni, kepha lapho wenza ama-cornflakes, uthola izinguquko eziningi, ufaka ushukela, okungeyona into eyenza ukulahlekelwa isisindo.
Izindawo zokuphumula ezidumile - i-porridge i-porridge
Ngokuvamile, bobabili odokotela kanye nezondlo zokudla okunomsoco bacabanga ukuthi yi-oat flakes enhle kakhulu ebizwa ngokuthi i-Hercules. Mayelana nalezi zinhlayiya, mhlawumbe, wonke umuntu uyazi. Kuphela, futhi uzilungiselele ukusebenzisa, udinga, ulandele ezinye izincomo, njengokuthi: uthele ngamanzi abilayo (futhi kungabikho ubisi, i-yogurt, i-kefir neminye imikhiqizo efanayo), esikhundleni soshukela engeza uju (okuyi-caloric, kodwa kuncane kakhulu ivolumu, kunokushukela evamile). Indle enjalo enezinzuzo ezinkulu zezempilo ingadliwa kanye nezingane esikhundleni sokudla kwasekuseni. Lezi zinhlayiya ziyogcwalisa umzimba ngamavithamini namaminerali. Ngaphezu kwalokho, ziqukethe i-fibre eningi, izinzuzo zazo ezaziwa, mhlawumbe kubo bonke nakakhulu.
Ezindaweni eziningi zaseRussia kukhona abakhiqizi bezinhlamvu zommbila. Abaningi babo bathengisa imikhiqizo yabo kwezinye izifunda. Elinye lamabhizinisi anjalo yi-Badrius (i-trade mark "i-Sizari"). Lo mkhiqizi ungomunye wamabhizinisi amakhulu kakhulu eRussia, okhiqiza izikhathi zokuphumula ezomile. Namuhla, ihambisana nemikhumbi emikhulu yokudayisa kulo lonke elaseRussia, ehlinzeka ngemikhiqizo ephezulu.
Esinye esidumile namuhla yilona uhlobo lwezitshalo zasekuseni - i-Cosmostars. Ngokuqinisekile wonke umuntu uzwile ngalezi zinhlayiya, ezihloswe ngokuyinhloko ezinganeni. Ukuma kwama-flakes nakho kukhuluma ngalokhu: ukuthi ukukhangisa kusakazwa kanjani kithi, konke kwenziwa ngesimo se-asterisk, futhi manje namarokethi. Abazali abaningi babheka ukuthi kuyindlela enhle yokudla kwasekuseni okucebile.
Bonke abantu banquma ngokuzikhethela ukuthi bathenge yini ukuthenga ukudla okulungele ukudla. Okokuqala, uma ukhetha udinga ukuhamba, yini oyidingayo: ukuze ujabulele ukunambitheka noma namanje ukugcina impilo. Kungcono ukhethe lezo zinhlayiya nge-flavouring encane kanye nokulondoloza izithako, kanti-ke, ushukela akuyona isithako esingcono kunazo zonke ezitsheni ezomile. Yidla okusanhlamvu kwasekuseni okudumile kakhulu kwezempilo!
Kunama-porridges ewusizo kuya emzimbeni
Izakhiwo eziwusizo ze-mussels
Yikuphi ukudla okubangelwa umdlavuza
Ukudla okunempilo nokuqotshwa
Ungadla kanjani ukuze ulondoloze isikhumba esibanzi?
Ukudla nokuphilile komzimba
Izifo ze-gynecological: endometriosis
Okudingayo ukuthenga esikoleni ngamabhalansi okuqala
Uthando Ekuphileni kukaJoe Dassin
Cocktail "I-blueberry blueberry"
Indlela ukupheka okusheshayo omelette fast?
I-Horoscope ye-Cancer-Abesifazane ngo-February 2017
Kungani amadoda athi "Cha"
Ubisi lwezimbuzi ekudleni kwezingane
Pizza nge ham, ihhashi yembuzi kanye utamatisi
Indlela yokuphumelela ukushada nomfokazi